Ibinzana elithi "base capsule" liqhelekile kuzo zonke iifashista-jikelele, izinto ezivunyiweyo kunye neepallist-ezivunyiwe izinto azisoze zaphela. "Ilungelo" izinto ezintsha akufanele zihlangabezane nemithetho yokwenza okulungileyo, kodwa zibonisa neendlela zokugqibela zefashoni. Yintoni endimele ndiyibonayo ekuqhubeni ukuthenga iholide?
Iimeko eziqhelekileyo ngexesha lebusika
Ishati yomntu osikiweyo ngumdlalo weklasi wamanje kubafazi abasebenzayo. Ikhati elinomgca wokutshintshela ngokugqithisileyo kunye neebhokhwe zezibini zasiyinto enqwenelekayo ngamantombazana - ububomi bayo ngokuzikhethela kugxininisa iindlovu zesetyhini. Ukongeza, ukusika okulula kwenza ihembe libe sisiseko seengubo ezininzi - zombini iofisi kunye nosuku zonke. Kulesi sihlandlo, abaqulunqi bancoma ukuba bakhuphe ngokufutshane malunga neengxaki zokuzibamba zigcwele iziprints, i-appliqués kunye ne-embroidery.
I-Rainbow Wave: Iimoto ezikhanyayo eLycbook uAlexis Mabille, uLeonard, uMary Katrantzou
Ugqoke kunye nesinqe esibi- Icala le-Laconic, isambatho senyama A-silhouette, i-flirty mini okanye i-dress shirt-shirt iya kulungelelanisa kwi-wardrobe yansuku zonke. Ingqwalasela ekhethekileyo ihlawulwa kwiindwangu zetsimbi kunye nemithambo yombane - i-disco trend is nowokuphakama kwintando.
Iingubo zengubo-2017 ezivela kuMario Dice, uMarcelo Burlon, uTeerry Mugler kunye noBlumarine
Ijekethi echanekileyo yinto yonke yexesha eliya kukulondoloza kwiintloko zento onxibe ngayo. Iyakwazi ukugqithisa ngokugqithiseleyo, okanye, ngokuchaseneyo, ihlambulukile, ihlotshiswe nge-hardware ephathekayo okanye ayinayo i-fasteners nonke. Nangona kunjalo, nguye ongena kwi-list-top of the hits-2017.
Ijacket ekhethekileyo esuka kwiDolce neGabbana
I-Pizhakomania: iqoqo lika-Ermanno Scervino, uRoberto Cavalli, uJohn Richmond noRalph Lauren
Ukukhetha umbala weenwele kumfazi omdala
Yintoni enxiba izicathulo ngeepikhi?
Iiklabhu zasebusuku, amaqela, amaqela asebhankini
Owesifazane othethekileyo: awukwazi ukwenza ngaphandle?
Iimpawu zesizwe zendlela yokugqoka
Izambatho ze-Ofisi: sikhetha ikhabethe le-stylish nexabiso elingabizi
I-Blepharoplasty yeebhokhwe ezincinci
Iingcebiso zonyango zamazinyo ekunakekelwa kwamazinyo
I-Souvenir "i-Ovechka" yoNyaka omtsha kwi-polymer yobumba: indlela yokwenza, inyathelo ngesinyathelo-master master class
Impembelelo yothando kumntu omdala
I-Vitamin Drink Pumpkin
Imifanekiso enomdla kakhulu kwi-MUZ-TV 2017: i-naked-half naked naked Olga Buzova, uKsenia Sobchak okhulelweyo, u-Anastasia Reshetova oshukumisayo.
IHososope ngoDisemba 2017 ukusuka kuVasilisa Volodina
Yiyiphi intombi ephumelelayo, namhlanje
Ulonwabo lwentombi kwiintsapho zobudlelwane
Indlela iimpawu zethu ezichaphazela ngayo umlingiswa wezinja